अफगानी खबरः पन्ध्र पृष्ठको मतपत्र, ८०० उम्मेदवार, कसरी हाल्ने मत ? — samadhannews.com
अफगानी खबरः पन्ध्र पृष्ठको मतपत्र, ८०० उम्मेदवार, कसरी हाल्ने मत ?
काबुल, २६ आश्विन:
अक्टोबर २० मा अफगानिस्तानमा संसद्को तल्लो सदनको निर्वाचन हुँदैछ । सो निर्वाचनमा करीब दुई हजार ५०० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ढिलागरी आह्वान गरिएको अफगानिस्तानको संसद्को तल्लो सदन वोलेसी जिर्घामा प्रतिनिधित्वको निर्वाचनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा उम्मेदवारी दिइएको छ ।